सधै हासेर लोकदोहोरि गाउने कल्पना दाहाल आज एकाएक रुदैरुदै आइन मिडियामा, आखिर किन यतिसम्म भयो त ? (भिडियो) – NepalajaMedia
March 6, 2021 475
अकस्मात उनलाई फोन आयो,फोनमा भनियो’तपाई अर्जुनको को हो?कल्पनाले भनिन ‘म अर्जुनको बहिनी हो किन र? ”उतर आयो “अर्जुनको डोजर दुर्घ`टनामा मृ*”त्यु भयो”।एता गीत गाउदै गरेकी कल्पना कहा सम्हालिन सकिन र ।
आज त्यहि कालो दिनलाई सम्झेर कल्पना दाहाल रुदै मिडियामा आएकिछिन् । आफू जहपदे एकान्तमा रुने गरेको र दाईको साथि बाटोमा आउदै गरेको देख्दा दाईनै आएको जस्तो आफुलाई लाग्ने भन्दै भावनात्मक दोहोरि समेत कल्पनाले गाइन् ।
Prevअचानक बाँदरको मृत्यु भएपछि गाउँनै शोकमा डुब्यो, हिन्दु परम्परा अनुसार गरियो अन्त्येष्टी
Nextबाँकेबाट आयो दु:खद खबर: बिबाह भएको ६ महिना मै स्वस्तिकाको रहस्यमय निधन!
अबदेखि लाइसेन्सको लिखित परीक्षा पास हुनेले १८ महिनासम्म ट्रायल दिन पाउने